चितवन कसरी बन्दैछ चोरी बाईकको अखडा ?
प्रनिश थापा मंगलवार, भदौ ३१, २०७६, ०१:४१:०० मा प्रकाशित
चितवन । प्रहरीले बरामद गरेका अधिकांश चोरीका मोटरसाइकलसहित पक्राउ पर्ने व्यक्तिलाई सोधपुछ गरे सबैको रेडिमेड उत्तर हुन्छ, यो मोटरसाइकल चितवनबाट किनेको हो ।
यसरी चितवनलाई चोरीको मोटरसाईकल बिक्री गर्ने अखडा बनाएका छन् मनकामना अटो एण्ड रिकन्डिसन वर्कसप जगतपुरका सञ्चालक दीपु भन्ने दीपेन्द्र श्रेष्ठ । प्रहरीकै संरक्षणमा दीपुले चोरीका मोटरसाइकल र गाडी कारोबार गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिका जयमंगलाका दीपुले उक्त वर्कसपमा काठमाडौंबाट चोरी गरी लगेका सबै मोटरसाईकलहरू एकै रातमा फोरफार गरी अप्रेसन (चोरीका मोटरसाईलको पार्टपूर्जा झिक्ने काम) समेत गर्ने गरेको छ ।
उक्त वर्कसपमा एकैरात अप्रेसन गरी अर्कै रङ लगाएर बेचबिखन गरिन्छ। एउटा मोटरसाइकलको पार्टपूर्जा, च्यासिस अर्कोमा लगाउने काम दीपु श्रेष्ठको समूहले गर्दैआएका छन्। उनको वर्कसपमा एकैरात 'अप्रेसन' गरिएका मोटरसाइकलको साइलेन्सरको थुप्रो नै देखिन्छ।
स्कारपियो, टाटा सुमो, बलेरोदेखि लिलामीमा गाडी उठाउने र त्यसको च्यासिस भारतबाट ल्याएका चोरीका गाडीमा प्रयोग गर्दै आएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ। यस्तो धन्दा गर्ने दीपुलाई सहयोग गर्ने काम तत्कालीन समयमा अपराध महाशाखामा कार्यरत प्रहरी जवान विपिन कार्कीले गर्दैआएका थिए। कार्कीको अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा सरुवा भएको छ भने उनी त्यहाँ घुमुवा प्रहरी रूपमा खटिएका छन्। मोटरसाइकल चोरी गर्ने गिरोहहरुसँग राम्रो कनेक्सन भएकाले दीपुलाई उनले सहयोग गर्दैआएको उनी निकट स्रोत बताउँछ।
गैरकानुनी रूपमा चारैतिर सीसी क्यामेरा
दीपुले मनकामना रिकन्डिसन हाउस वरिपरी निकै टाढासम्म देखिने गरी गैरकानुनी रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा राखेका छन्। उनको वर्कसप नजिकका रुखमा समेत सीसीटीभी छ। सीसीटीभी राखेर उनले चोरीका मोटरसाइकलहरु किनबेच गर्दै आएका छन्।
चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका केही घुमुवा प्रहरी, स्थानीय देखी केन्द्रसम्मका केही पत्रकारहरुलाई समेत मासिक रुपमा नजराना दिएर सूचना बाहक बनाएका छन्। यसरी निर्वाध रुपमा चोरीका गाडी र मोटरसाइकल बिक्री गर्ने काममा उनले आफू लाई चितवनका पूर्वमाओवादी नेताको समर्थन रहेको भन्दै हिंडेका छन्।
उदयपुरका मिलनलाई प्रयोग गरी तस्करी
दीपुले पछिल्लो समयमा उदयपुर घर भएका श्याम थापा भन्ने मिलन लामालाई परिचालन गरी काठमाडौंबाट मोटरसाइकल चोरी गर्न लगाई चितवनमा ल्याई पाटपूर्जा परिवर्तन गरी नयाँ बनाएर पुनः काठमाडौंमै लगेर बिक्री गर्दैआइरहेका छन्।
मिलन अहिले पनि चितवन आउजाउ गरिरहेका छन्। उनी निकट स्रोतका अनुसार चोरी मोटरसाईकल २० देखि २५ हजारमा किनेर दीपुले एउटा ईञ्जिन र च्यासिस अर्कोमा फिट गरी डेन्टपेन्ट गरी नयाँ बनाउँदै नक्कली ब्लुबुक बनाएर ज्ञ लाखदेखि ब्रान्ड हेरी डेढ लाख रुपैयाँसम्म बिक्री गर्दै आएका छन्। दीपुको चोरीको गाडी चढ्नेमा एक जना केन्द्रियस्तरको टेलिभिजन चलाउने पत्रकार समेत रहेको बुझिएको छ।
प्रहरी जवानदेखी एसएसपीसम्मलाई हातमा लिँदै
चोरीका गाडी र मोटरसाइकल खरिद बिक्री गर्ने मुख्य नाइके भनिएका पश्चिम चितवनको जगतपुरस्थित मनकामना अटो एण्ड रिकन्डिसन वर्कसप जगतपुरका सञ्चालक दीपु भन्ने दीपेन्द्र श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी कार्वाही गर्ने पर्याप्त आधार हुँदा हुँदै चितवन प्रहरीले पटकपटक उन्मुक्ति दिँदैआएका छन्।
चितवनका तत्कालीन एसपी र हालका एसएसपी दीपक थापाका बदनाम घुमुवा सई कमल परियार र प्रहरी जवान बिपिन कार्कीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा उनको तस्करी को जालो झनै फैलिएको थियो। नामुद र बारम्बार विवादतमा आइरहने दीपुसँग सइ परियार र जवान कार्कीको राम्रो कनेक्सन रहेको स्थानीय स्रोतले बताएको छ।
तत्कालीन समयमा चितवनको घुमुवा भएर मोटरसाइकल चोरदेखि तस्करहरुसँग राम्रो कनेक्सन र छवि बनाएका सइ परियारको बारेमा प्रहरी मुख्यालयको उजुरी छानबिनसम्म व्यापक विरोध हुन थालेपछि चितवनका तत्कालीन एसपी दीपक थापाले उनलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर सप्तरीको रवाना दिन बाध्य भए।
तर, हालै असईबाट सईमा बढुवा भएपछि ईलाका प्रहरी कार्यालय ठोरी पर्सामा दरबन्दी भएका उनै परियारलाई अपराध अनुसन्धान महाशाखामा राख्न एसएसपी दीपक थापाले अनावश्यक दबाब दिइरहेका छन् । उनको काम अहिले पनि दीपु श्रेष्ठदेखि विभिन्न धन्दा गर्ने ब्यक्तिहरुबाट रकम उठाएर एसएसपी दीपक थापालाई दिने काम हुँदै आएको छ। स्रोतका अनुसार चोरीका गाडी र मोटरसाइकलको कारोबार गर्ने दीपुको प्रहरीसँग कनेक्सन यस्तो कसिलो छ की दीपक थापा चितवनको एसपी हुँदा दीपु उनकै क्वाटरमा गएर खाना समेत खाने गर्थे। त्यसक्रममा उनको राज नै चलेको कुरा अझै जिल्लाबासी बिच चर्चा चल्ने गरेको छ।
यसरी चुहिन्छ प्रहरीबाटै सूचना
तत्कालीन समयमा ललितपुर प्रहरी परिसरले छ वटा चोरीका मोटरसाइकलसहित पक्राउ परेका तेजबहादुर तामाङको बयानका आधारमा दीपुलाई पक्राउ गर्न टोली नै खटाएको थियो।
तर, उक्त टोली जान लागेको सूचना पहिले नै दीपुले थाहा पाए। स्रोतका अनुसार दीपुसँग पहिलेदेखि कनेक्सन भएका प्रहरीले तत्कालीन परिसरका एसएसपी रबीन्द्र धानुकलाई समेत आकर्षक घुस दिएर प्रभावमा पारियो।
र, ललितपुर प्रहरीको टोली चोरीका मोटरसाइकल बिक्री गर्ने दीपु श्रेष्ठ नभेटिएको भन्दै फर्काइयो। सो, समयमा धानुक पनि मोटरसाइकल चोर दीपुको प्रभावमा परेका थिए। तेजबहादुर तामाङको बयानका आधारमा उनले चितवन पठाएको टोलीलाई बीच बाटै फर्काउनुले उनी दीपुको प्रभावमा परेको कुरालाई पुष्टी गर्थ्यो।
तेजबहादुर तामाङले बयानका क्रममा मोटरसाइकल चोरीमा दीपु र सुमितको नाम लिएका थिए। मिलन र आफूले मोटरसाइकल चोरी गर्ने र दिपुको रत्ननगर नगरपालिकास्थित मनकामना अटो एण्ड रिकन्डिसनमा लगेर बिक्री गर्ने बयान दिएका थिए।
त्यहीं बयानका आधारमा ललितपुर प्रहरीले दीपुलाई पक्राउ गर्न टोली खटाएको थियो। तर, त्यो टोली गएको सूचना पाएपछि दीपुले एक प्रहरी अधिकृत मार्फत तत्कालीन प्रमुख धानुकसँग सेटिङ मिलाएर पक्राउ नगरी फर्काउन सफल भएको ललितपुर प्रहरी स्रोतले बताउँछ।
डिआइजी अधिकारीले बरामद गरेका थिए ५ वटा मोटरसाईकल
तराईका विभिन्न जिल्लादेखि काठमाडौंसम्म नेटवर्क बनाउँदै आएका दीपुलाई ललितपुर प्रहरी परिसरका तत्कालीन एसएसपी र डिआइजी पिताम्बर अधिकारीले तेज बहादुर तामाङ र मिलन लामालाई २ बर्षअघि ५ वटा चोरीका मोटरसाइकलसहित चितवनबाट पक्राउ गरेको थियो।
उनीहरुले चोरीका मोटरसाइकल मनकामना अटो जगतपुरका दीपुुुलाइ बिक्री गर्ने गरेको बयान दिए। त्यससँगै मिलन लामा र तेजबहादुर तामाङले सुनका सिक्री लुटपाट गरेको तथ्य पनि खुल्यो। चोरीका गाडी, मोटरसाइकल मात्र होइन, लुटेको सिक्री पनि दीपुलाई नै बिक्री गर्ने गरेको बयान दिएका थिए।
त्यहीं बयानका आधारमा दीपुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो. प्रहरीले २०७३ पुस २ गते भरतपुर महानगर ४ बाट बरामद गरेको रातो रङको सुजुकी मारुती कार, बा ४० प ६९५६, ना ५ प ४५९५, ग १ प ९३०, ना १७ प २८४९, बा ३ प ७९५०, लु ४ प ९८७३ लगायतका २४ वटा चोरीका मोटरसाईकल समेत दीपुकै भएको त्यतिबेला खुलेको थियो ।
अदालतबाट छुटेपछि तस्करीको झालो
मोटरसाइकल सहित पक्राउ परेका उनीहरु केही महिनापछि अदालतबाट अति न्यून धरौटीमा उनी छुटे। छुटेपछि पुनः चोरीकै गाडी र मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको धन्दा गर्दै आएका छन्। तेजबहादुर तामाङले पक्राउ परिसकेपछि चोरीका मोटरसाइकल दीपु श्रेष्ठलाई प्रतिगोटा २० देखि २५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको बयान दिएका छन्।
दीपुको नाम बोलेपछि उनले आफूसँग कनेक्सन भएका प्रहरीका हाकिम प्रयोग गरी तेजबहादुर तामाङलाई इन्काउन्टर नै गराउने सम्मको तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ। सुमितलाई संरक्षण गर्ने काम पनि दीपुले नै गर्दै आएका छन्। दीपुका विरुद्ध गाडी र मोटरसाइकल चोरीका मुद्दा काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा लगायत केही जिल्लामा छन्।
यसरी चोरीका गाडी र मोटरसाइकल खरिद बिक्री गर्ने गिरोहका नाइके दीपु श्रेष्ठको चितवनका हरेक प्रहरी प्रमुखहरुसँग कनेक्सन बलियो भएकै कारण उनी जोगिँदै आएका छन्।
पक्राउ परेका दीपु घरौटीमा छुटे
चोरी गाडी र मोटरसाइकल खरिद र बिक्री गिरोहका नाइकेका रुपमा चिनिएका दीपु भन्ने दीपेन्द्र श्रेष्ठलाई महानगरीय अपराध महाशाखा र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको बिशेष टोलीले नवलपुरबाट पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइ घरौटीमा छाडेको छ।
पश्चिम् चितवनस्थित जगतपुर घर भएका दीपुलाई चितवनका घुमुवा प्रहरी टोली र पुर्व माओवादीको एक समुहले बिगत देखी नै जोगाउदै आएको थियो। दीपुका प्रतिस्पर्धी चोरीका अर्का नाइके रोहित श्रेष्ठलाई प्रमाणसहित पक्राउ गरेर सार्वजनिकमा मुद्दा दर्ता गरेपछि ट्राफिक महाशाखा र अपराध महाशाखाको टोलीले गोप्य रुपमा चितवनमा चोरी गिरोह बिरुद्व अप्रेशन थालेको थियो।
चितवन रत्ननगरमा न्यु मनकामना रिकन्डिसन हाउस, जगतपुरमा मोटरसाइकलका पार्टसहरु, नारायणगढ शहिदचोकमा शोरुम सञ्चालन गरेर दीपुले काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न ठाउँबाट चोरी भएर चितवन पुगेका मोटरसाइकल खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएका थिए।
दीपुको समुहमा रहेका केही चोरलाई ट्राफिक र अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेपछि उनीहरुको बयान कै आधारमा दीपु पनि एम्बुसमा परेको अपराध महाशाखाले जनाएको छ।
गृह मन्त्रालय भन्छ : 'अनावश्यक दु: ख नदिनु'
चितवनका पुर्व माओवादीका नेता मार्फत दीपुले गृह मन्त्रालयबाट अनाश्यक दुःख नदिनु भन्ने व्यहोराको पत्र समेत बनाउन लगाएर प्रहरीलाई नै चुनौती दिंदै आएका थिए। उक्त पत्रलाई नै आधार बनाएर घुमुवा प्रहरीले दीपुसँग आर्थिक लाभ लिएको छ।
दीपुको गिरोहले वीरगञ्ज र भैरहवा भन्सारमा सेटिङ मिलाएर अबैध गाडीको कारोबार गर्दैआएको छ। उनले भारतबाट पुराना तथा नयाँ गाडीहरू चोरी गरी ल्याई बेवारीसे अबस्थाका भन्दै भन्सारमा बुझाउने, कवाडीको भाउमा भन्सार सकार्ने र पछि नयाँ गाडी चोरेर ल्याई त्यसको पाटपुर्जा पुरानो गाडीमा हालेर ल्याउने गरेका छन्।
दीपुको समुहले बिशेषगरी स्कारपियो, बुलेरो, स्यान्ट्रो र मोटरसाईकलको कारोबार गर्दै आएको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन्। तीन वर्ष अघि चितवन प्रहरीले दर्जनौ चोरीका गाडी र मोटरसाइकल सहित विभिन्न बैंकको चेकबुक, छाप, गाडीका नक्कली नम्बर समेत बरामद गरेको थियो। जसमा अधिकांश चोरीका पाटपुर्जा खरिद गरेर नक्कली ब्लुबुकहरु दीपुले नै बनाएको खुलेको थियो।
दीपुले छण्रटण् हजारमा चोरीका मोटरसाइकल किनेर सामान खोलखाल गरी द्दण् मिनेटभित्र नयाँ लटको बनाएर दुई लाख सम्म बिक्री गर्दैआएका छन्। उनले अञ्चलीकरण गरेर नयाँ लटको बनाइएका थोत्रा ​​मोटरसाइकलमा चोरीका नयाँ मोटरसाइलको सामान खोलखाल गरेर नयाँ बनाइ बिक्री गर्छन्।
दुर्गन्धित बनाउने रविका समर्थक, सरसफाइ गर्ने प्रहरी बिहिवार, भदौ १२, २०७६, १८:३०:००
भरतपुर अस्पताल भित्रै युवकले गरे आत्महत्या शनिवार, कार्तिक २३, २०७६, ०९:१६:००
लामिछाने र कंडेलको बयान सकियो, थुनछेक बहस सुरु सोमवार, भदौ ९, २०७६, २३:०१:००
ललिता निवास प्रकरण : थप ५४ जनाको सूचीमा को–को परे ?
‘गुण्डा नाइके’ पक्राउ : लाजिम्पाटमा के गर्दै थिए दावाका सहयोगी सत्यमान ?
रुपन्देहीमा एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार, तीन पक्राउ
आफन्तबाटै असुरक्षित बालिका, कसलाई गर्ने विश्वास ?
बमजनको आश्रममा छापा
मोबाइलको विषयलाई लिएर बुहारीको हत्या गर्ने परिवार नै पक्राउ